Aruurinta Daynta ee Bilaabashada eCommerce: Tilmaamaha qeexaya | Martech Zone
Khasaaraha macaamil ganacsi ku saleysan ayaa xaqiiqo u ah nolosha ganacsiyo badan, sababtoo ah dib u celinta, biilasha aan la bixin, dib u noqoshada, ama alaabada aan la soo celin. Si ka duwan ganacsiyada amaahda bixiya ee ay tahay inay aqbalaan boqolkiiba inta khasaaruhu qayb ka yahay moodeelkooda ganacsi, bilowgyo badan ayaa ula dhaqma khasaarooyinka macaamilku inay yihiin dhibaato aan u baahnayn fiiro gaar ah. Tani waxay u horseedi kartaa dhiigbaxyo khasaaro sababtoo ah anshaxa macaamiisha oo aan la hubin, iyo dib u dhac khasaaro oo si weyn loogu yareyn karo dhowr tallaabo oo fudud. Tilmaamaha soo socda waxaan dib u eegi doonnaa khasaarahan, sababta ay u dhacaan, iyo waxa la qaban karo si loo yareeyo.
Tilmaamahan ayaa si gaar ah waxtar u yeelan doona haddii aad tahay suuq ka shaqeynaya dib u soo celinta macaamiisha iyo iibiyeyaasha kuwaas oo farsamo ahaan mas'uul ka ah laakiin inta badan aan bixin karin ama bixin karin, adeegga lacag-bixinta dambe (xayeysiinta, SaaS, iyo kuwa kale) oo aan awoodin inaad ka qaaddo macaamiisha haysan ama qalab lacag bixin oo dhacday faylka, eCommerce iyo shirkad macaamiil ah oo wax ka qabata dib u celinta iyo codsiyada soo celinta ama maaraynta lacagta iyo adeegyada maaliyadeed ee la kulma soo celinta ACH iyo lacagaha kale ee seegay.
Khasaaraha iyo Sababta ay u dhacaan
Ganacsiyada guuleysta waxay leeyihiin macaamiil badan, qaar badanna waxay ku celceliyaan macaamiil. Ganacsi macaamil ganacsi oo weyn ayaa soo jiita inta badan macaamiisha wax iibsada, hela alaabada iyo / ama adeegyada isla markaana farxad kaga taga. Hase yeeshe, nooc kasta oo ganacsi wuxuu ku xiran yahay heer qasaaro ah. Inkasta oo inbadan oo kamid ah ay noqon karto ula kac, cilmi baaris ayaa muujisay in boqolkiiba sii kordheysa aysan aheyn.
Dhaqdhaqaaqa wax iibsiga internetka ayaa gabi ahaanba isbedelay tobankii sano ee la soo dhaafay. Iibsiga khadka tooska ah ayaa hadda caado ah. Haddii ay ahaan lahayd adeegga dharka lagu dhaqdo ama buug cusub, waxaan haysannaa kaararka deynta oo kaydsan iyo 1-guji oo iibsiyo ah oo la dejiyay, oo leh bogag degitaan loogu talagalay in lagu yareeyo khilaafaadka. Jawigan wax iibsiga ee dalwaddii ah, oo ay weheliso xeerar si fudud dib loogu soo celin karo, ayaa xitaa ka fududeeyay iibsiga khilaafaadka hooseeya, wuxuu horseedaa qoomamo iibsadeyaasha oo kordha iyo dareen ah in macaamiisha ay diidi karaan inay bixiyaan maxaa yeelay ganacsiyada ayaa si fudud u aqbali doona taas. Cilmi baaris ayaa muujisay in illaa 40% soo celinta iyo dib u celinta sababtu tahay sababahan awgood, oo aysan aheyn khiyaano ama xatooyo aqoonsi. Way fududahay, waxay dareemeysaa inaan waxyeello lahayn, mana jiraan wax hadal ah oo ku lug leh ganacsadaha.
Waxay kuxirantahay ganacsigaaga, khasaaraha qaar waxaa sababi doona khayaanada iyo xatooyada aqoonsiga (the Chargeback Gurus wuxuu lambarkaas geliyay heer hoose oo aad u hooseeya 10-15% marka la barbar dhigo khiyaano saaxiibtinimo). Maaha wax aan caadi ahayn in carruurtu ay isticmaalaan kaarka waalidkood iyaga oo aan ogayn, laakiin wali waxaa jira niman khiyaamo badan oo halkaas jooga, gaar ahaan maaddaama khiyaanooyinka kaararka deynta ee adduunka dhabta ahi ay kordhayaan. Xaaladahan oo kale, la macaamili meysid macaamiisha dhabta ah, laakiin qof ayaa adeegsanaya faahfaahintooda.
Khasaare intee la eg ayaa Badan?
Ganacsiyada ku saleysan macaamil ganacsi waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan xadkooda iyo shuruudaha bixiyaha lacag-bixinta. Bixiyeyaasha badankood waxay u baahan yihiin wax ka yar 1% dib u soo celinta iyo in ka yar 0.5% celinta ACH. Waad “qarin kartaa” qaar ka mid ah khataraha sare, qaybaha faa'iidada ku leh muggaaga haddii heerkaaga luminta guud uu hooseeyo, laakiin waa inaad hoos uga dhigtaa guud ahaan. Waqtiga dheer, xitaa xaddiga 1% luminta ayaa isku urursata waqti ka dib.
Ka Hortagga Adeegga
Adduunyada halista macaamil ganacsi, waa aqoon guud intee in le'eg ayay shirkaduhu ku bixiyaan ka hortagga iyo ogaanshaha ka hor inta aan macaamilku dhicin, oo kaliya inay gebi ahaanba iska indhatirto yaraynta ka-dib-u-luminta iyo adeegga.
Khasaaruhu waa qayb ka mid ah ganacsi kasta, maxaa yeelay ku habboonaynta wixii eber khasaaro ah waxay ka dhigan tahay ka hortag badan - waxaad ka jeesaneysaa ganacsi wanaagsan. FraudSciences, iyo bixiyaha kahortaga khiyaanada hore, waxay awood u yeelatay inay ka caawiso ganacsatada inay laba jibbaaraan ganacsiga iyagoo caymis ka bixinaya dib u celinta. Waa inaad tixgelisaa inta ganacsi ee aad diideyso sababtoo ah shuruudaha aad u xaddidan, iyo waxa kale ee aad sameyn kartid haddii aad leedahay heerar hoose oo lumis ah.
Haddii aad adeeg bixinayso oo aad si fudud ugu damiso macaamiisha aan bixinayn, waxaad u badan tahay inaad la kulanto qiimo lumis aad u hooseeya. Waa inaad tixgelisaa imisa ka mid ah macaamiishaas oo aad dib ugu guuleysan karto adoo isku dayaya inaad xalliso dheelitirka baaqiga ah oo aad maqashid. Adeeg wanaagsan kadib-luminta waxay diirada saareysaa khibrada macaamiisha iyadoo la xallinayo arrimaha adeegga inta ay soo ceshanayso lacagtii lagugu lahaa.
Sidoo kale waa run marka la khasaariyo khayaanada. In kastoo qaar ka mid ah kiisaskan khayaanada ay yihiin kuwo dhab ah, inbadan ayaa ka dhashay is faham la'aan ama is afgaranwaa xagga adeegga ah. Adiga oo dhisaya socod adeeg ah oo diiradda saaraya fahamka ujeedka macaamilka, waxaad awoodi doontaa inaad hagaajiso haynta, bar kooxdaada sida looga hortago khasaaraha si ka wanaagsan, oo lacag lagu siiyo.
Maalmihii Hore ee Hore
Waxaan kugula talineynaa inaad ka shaqeyso qasaaraha guriga dhexdiisa usbuucyada ugu horreeya. Ka shaqeynta qasaaraha naftaada waxay leedahay laba faa'iido:
Maaddaama aad isticmaaleyso astaantaada si aad ula xiriirto macaamilka, waxaad u badan tahay inaad la heshiiso macaamiisha wareersan oo aad haysato.
La macaamilka macaamiisha xanaaqsan waxay noqon kartaa cashar qiimo leh oo ku saabsan meheraddaada, oo ma doonaysid inaad ku xisaabtantid kuwa kale inay ku siiyaan jawaab celintaas goor hore.
Waxaa jira laba waxyaalood oo la sameeyo ka dib marka la cayimo:
Bilow ah habka dib u soo kabashada otomaatiga ah. Haddii kaarka la bixin waayey, iskuday inaad markale ku soo dallacdo dhawr maalmood ka dib. Haddii bixinta ACH ay guul darreysato, tixgeli mar labaad inaad isku daydo (qaabka ujrada ee ACH wuu ka duwan yahay iskudayguna wuu ka sii adag yahay). Haddii aad haysato wax ka badan hal qalab lacag bixin oo ku lifaaqan koontada, iskuday inaad ku soo dallajiso midkaas. Tani waa inay la socotaa isku day fidin oo fudud.
Start matalaad bixiyahaaga lacag bixinta. Waqti kadib waxaad baran doontaa nooca cadeymaha ee looga baahan yahay matalaad iyo inaad ku fiicnaato rogista dib u celinta. Waxaad dib ugu soo laaban kartaa 20-30% adoo adeegsanaya qaabkan.
Markii Uruurinta Hore Iskudayo Fashilmo
Ganacsiyo badan ayaa dib ugala noqda adeegsiga hay'adaha ururinta deynta si ay uga soo kabtaan khasaaraha. Warshaduhu waxay kasbadeen sumcad xumo iyagoo sii wataya adeegsiga xeelado dagaal iyo UX xun. Tani waa halka xulashada lamaanaha saxda ah ay muhiim tahay; la shaqeynta shirkad tiknoolajiyad ku takhasustay khibrada isticmaale ee deyn ururinta ayaa runtii kaa caawin karta sumaddaada.
Shaqada aruurinta ee banaanka ayaa taageeri karta astaantaada adoo macaamiisha siinaya waddo ay ku carqaladeeyaan jahwareerkooda kahor bixinta lacagta. Macaamiisha diida inay kula hadlaan, bixinta hanaan adag oo khilaaf ah inta ay weydiisanayaan lacag bixinta waa marin wax ku ool ah oo lagu fahmayo sababta ay dib ugu noqdeen lacagtooda markii hore.
Tani sidoo kale waa run dhibanayaasha khayaanada: siinta macaamiisha hab fudud oo ay ugu muujiyaan dhinac saddexaad waxay inta badan ka caawisaa kala soocida dhibbanayaasha dhabta ah ee khiyaanada ee iibsadayaasha qoomamada leh waxayna siinaysaa dhibanayaasha khiyaanada dareen ilaalin iyo faham.
Khasaaraha macaamil ganacsi waa qeyb ka mid ah ganacsiga oo waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah. Adeegsiga hanaan fudud oo guriga dhexdiisa ah oo lala yeesho lamaane xoog badan oo gacan ka geysanaya ayaa kaa caawin kara inaad lacag hesho, si fiican u fahamto macmiilkaaga, iyo xitaa hagaajinta haynta.
Tags: khiyaanada ecommercekhiyaano saaxiibtinimoururinta deynta dibaddakhasaaraha macaamil ganacsi
Istaatijiyadda Kaydinta Qalabka ee Moobilka